1951 Iwu nke 1735 chta Amoosu, nke mere ka ịta amoosu bụrụ mpụ na Great Britain, kagburu.
1951 Museumlọ ihe nkiri Witchcraft na Isle nke Mmadụ meghere site na nkwado site na Gerald Gardner.
1954 Gardner bipụtara akwụkwọ mbụ na-abụghị akụkọ ifo na Wicca, Ịta Amoosu Taa .
1962 Raymond na Rosemary Buckland, bidoro ndị amoosu, bịara United States wee bido ịzụ ndị ọzọ.
1971 Zsuzsanna Budapest malitere na nkwekọrịta nwanyị nke nwanyị na California.
1979 Starhawk bipụtara Ogwurugwu Igwe: Ihe omuma nke okpukpe ochie nke Chineke di uku .
1986 Raymond Buckland bipụtara Akwụkwọ zuru ezu nke Ịta Amoosu.
1988 Scott Cunningham bipụtara Wicca: Nduzi maka Onye Na-ahụ Maka Onwe Ya .
2007 United States Armed Services kwere ka Wicca pentagram tinye ya na ili n'ebe ndị agha na-eli ozu.
Gerald Gardner, onye ọrụ obodo obodo Britain, na-ekwu na ọ bụ Wicca kere ya, ọ bụ ezie na ụfọdụ nkwekọrịta na-aga n'ihu gburugburu ma ma ọ bụ na ọ bụ eziokwu. Gardner kwusiri ike na e bidoro ya baa n'ọgbụgba ndụ New Forest, nke Dorothy Clutterbuck nọ na 1939. Ndị eb͕ochi a na-ekwu na ha bụ omenala Wiccan agbụrụ nke emeela ememe na omume tupu oge ndị Kraịst.
Na 1951, a kagburu iwu na-akwado omume amoosu na England, n'oge na-adịghịkwa anya mgbe nke ahụ gasịrị, na 1954, Gardner bipụtara akwụkwọ mbụ ya na-abụghị akwụkwọ akụkọ, Ịta Amoosu Taa (Berger 2005: 31). Ihe gbasara akụkọ ya, nke mbụ site na onye America bụ onye ọrụ enyemaka Aiden Kelly (1991) na ndị ọzọ (Hutton 1999; Tully 2011) Hutton (1999), onye ọkọ akụkọ ihe mere eme nke dere akwụkwọ kachasị oke banyere Wicca, kwuru na Gardner ihe dị omimi karịa nanị ịkọwapụta ma mee ka ọha na eze mara okpukpe ochie zoro ezo: o kere okpukpe ọhụrụ dị egwu nke gbasaa gburugburu ụwa. Onye ọrụ Dneren Valiente nyere aka na Gardner, nke dere ọtụtụ n'ime uri ndị a na-eji eme ememe ahụ, si otú ahụ na-enyere ha aka ịmalite ime mmụọ (Griffin 2002: 244).
Ụfọdụ n'ime ụmụ akwụkwọ Gọọmenti Gardner ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ nke ndị ahụ zụrụ ya, dịka Alex na Maxine Saunders, kere ọdịiche nke usoro ime mmụọ na ememe nke Gardner, na-agbagha òtù ọhụrụ ma ọ bụ ụdị nke Wicca ịzụlite. Site na mmalite, e nwere ụfọdụ ndị na-ekwu na e debawo ha na agba ndị ọzọ e kpuberelarị kemgbe ọtụtụ narị afọ. Ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ndị a ma ọ bụ ọganihu nke akwụkwọ Gardner ma ọ bụ nyochaa. O yikarịrị ka ụfọdụ n'ime otu mmetụta ahụ ndị ahụ gwara Gardner, gụnyere agụmakwụkwọ Western ma ọ bụ omenala magburu onwe ya, akụkọ ọdịnala na ọdịnala ịhụnanya, Freemasonry, na ogologo oge nke ndị na-agwọ ọrịa ma ọ bụ ndị maara ihe na - Hutton 1999).
A na-ekwenye na ndị Britain kwabatara Raymond na Rosemary Buckland wetara Wicca na United States. Ma, akụkọ ihe mere eme dị nnọọ mgbagwoju anya dị ka ihe àmà na-atụ aro na akwụkwọ nke akụkọ akụkọ ụgha nke Gardner banyere Witchcraft na akwụkwọ akụkọ ya na-abụghị akụkọ ifo, Ịta Amoosu Taa bugara United States tupu ibute Bucklands (Clifton 2006: 15). Ka o sina dị, Bucklands dị mkpa na mbubata nke okpukpe ka ha kere Wiccan gbara mbụ na United States ma malite ndị ọzọ. N'otu oge n'America, okpukpe malitere ịmasị ndị inyom na-achọ nwanyi ihu nke ndị Chineke na ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi bụ ndị adọrọ mmasị na ememme nke oge oge. Mmeghari abụọ ahụ, n'aka nke ya, nyeere aka gbanwee okpukpe. Ọ bụ ezie na a na-eme ememe Chineke, ọgbụgba ahụ Onye Isi Nchụpụ Onye Ọrụ Gardner na-edugaghị azụlite ọnọdụ ime mmụọ nke nwanyị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụkarị ka a chọrọ ka nnukwu onye ụkọchukwu rịdaa mgbe ọ ka na-eto eto (Neitz 1991: 353).
Miriam Simos, onye na-ede ihe n'okpuru aha anwansi ya, bụ Starhawk, nyere aka n'ịkwalite nchekasị nke nwanyị na nke nwanyi. Wicca. A nabatara ya na ọdịnala ọdịnala nke Fairie na nke Zsuzsanna Budapest nke nwanyị nke ime mmụọ. Akwụkwọ Starhawk, Azụ Na-agba Okpukpe: Nlọghachi nke Okpukpe Oge Ochie nke Chineke Dị Ukwuu (1979), nke jikọtara eri abụọ nke ọzụzụ ya, rere ihe karịrị 300,000. (Salomonsen 2002: 9). N'otu oge a, okpukpe ahụ sitere n'okpukpe dị omimi (nke e debere ihe ọmụma dị nsọ na nke anwansi maka mmalite), na-elekwasị anya na ọmụmụ, na okpukpe nke ụwa (nke bịara ịhụ ụwa dị ka ngosipụta nke Chi nwanyị - dị ndụ ma dị nsọ) (Clifton 2006: 41). Mgbanwe abụọ a nyere aka ime ka okpukpe bụrụ nke ndị nwanyị na gburugburu ebe obibi metụtara na United States na mba ofesi. E nyekwara aka gbasaa mgbasa nke okpukperechi site na mbipụta nke akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ dị ọnụ ala nke ukwuu na mmụba nke ịntanetị.
Ná mmalite, Bucklands, bụ ndị na-esochi iwu nke Gardner, kwuru na ọ dị mkpa ka a zụlite ya na nhazi nke atọ nke Wiccan, onye a zụlitere n'ọgbụgba ndụ ya ma gafee ọzụzụ atọ ma ọ bụ ogo mmụta, dịka nke dị na Freemasons. Otú ọ dị, Raymond Buckland gbanwere ọnọdụ ya na nke a. N'ikpeazụ, ọ na-ebipụta akwụkwọ ma kpụgharịa vidio na-akọwa otú mmadụ nwere ike isi malite. Ndị ọzọ, karịsịa Scott Cunningham, dekwara otú-na akwụkwọ ndị mere ka nbido onwe onye bụrụ ihe nkịtị. Wicca: Otu Nduzi maka Omume Nanị (Cunningham 1988) naanị ya ere akwụkwọ 400,000. Akwụkwọ ya na akwụkwọ ndị ọzọ esi enyere aka mee ka ọtụtụ ndị Wiccans na-eme naanị. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke saịtị Ịntanetị na uto nke òtù ndị nche anwụọ (ya bụ, ìgwè ndị na-enye ozi, ememe ememe, na mgbe ụfọdụ okpukpe na-agbapụta, ndị a na-ezo aka dị ka ememe) na-eme ka ndị Wiccans na ndị ọzọ na-eme ihe ike na-enwe ike ịkpọtụrụ ndị ọzọ ma hà na-eme ma ọ bụ naanị. Ọganihu nke akwụkwọ ndị a na ebe nrụọrụ weebụ nyere aka mee ka Wicca ghara inwe okpukpe omimi. Ná mmalite, ọ dị n'ọgbụgba ndụ ahụ na a kụziiri ya ihe ọmụma dị iche iche, mgbe mgbe dị ka ihe nzuzo nzuzo nke a pụrụ inyefe ndị ọzọ abanye n'okpukpe. Obere, ma ọ bụrụ na ọ bụla, nke ememe ma ọ bụ ihe ọmụma ugbu a ka na nzuzo.
Nkwenye na Wicca adịghị mkpa karịa ahụmahụ nke Chineke ma ọ bụ anwansi. Ọ bụ ihe Wiccans na-ekwukarị na ha ekweghị na chi (Chineke) na Chineke (s); ha na-enweta ha. Ọ bụ site n'ememe na ntụgharị uche ka ha na-enweta ahụmahụ a nke Chineke ma na-eme ihe anwansi. Okpukpe ahụ abụghị ozizi, ya na Wiccan Rede "Mee dika ị ga - achọ ma ọ bụrụhaala na i merụ onye ọ bụla" bụ nanị ọchịchị siri ike na ngwa ngwa. Okpukpe, dị ka Gardner si kwuo, dị na Europe dum tupu oge ọdịdị nke Iso Ụzọ Kraịst. N'okwu nke Gardner, Chineke na Chineke kwadoro ihe ọ kpọrọ ike nwoke na nwanyi. Otu dị iche iche, nke a na-ede dị ka agbachara agba, bụ ihe kwesịrị ekwesị iji chee na nhazi ahụ bụ ndị inyom isii na ndị ikom isii nwere nwanyị ọzọ bụ nnukwu onye nchụàjà. Otu n'ime ndị ikom nọ n'ìgwè ahụ na-eje ozi dịka Nnukwu Onye Nchụàjà mana Ọchukwu bụ onye ndu ndú. N'ime ọtụtụ ọgbụgba ole na ole nwere ọnụ ọgụgụ a kpọmkwem nke ndị na-eso ya, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị bụ obere ìgwè (Berger 1999: 11-12).
Ememe ememe ahụ dabeere na kalenda ugbo nke na-emesi ọmụmụ. Ekwusiri okwu ike a na mgbanwe
mmekọrịta dị n'etiti Chineke na Chineke dị ka e gosipụtara na ememe. A na-ele Chineke anya dịka ebighebi ma na-agbanwe site na nwa agbọghọ, na nne, na crone; mgbe ahụ, ka oge na-aga, ọ na-alaghachi na mmiri mgbe ọ bụ nwa agbọghọ. A mụrụ Chineke site na nne na midwinter, na-aghọ ya consort ke ini utọ, akpa iji hụ na ibu nke ihe ubi na ọdịda; mgbe ahụ, a na-alaghachi ya n'oge oyi solstice. E gosipụtara Chineke na mpi, ihe mgbaàmà nke ịgba chaa chaa. Ihe oyiyi ahụ bụ agadi nke gbanwere oyiyi nke Ekwensu n'ime Iso Ụzọ Kraịst. A na-ele chi nwanyị nile anya dịka akụkụ nke otu Chineke dị ka a na-ewere chi nile dịka akụkụ nke otu Chineke.
Foto nke Wicca dịka okpukpe ochie, nke ụmụ nwanyị na-edu, na-eme ka ọmụmụ nke ala ahụ na-eme, ụmụ anụmanụ na ndị mmadụ na-ewere ya site na Margaret Murray (1921), bụ onye dere okwu mmalite ya n'akwụkwọ ya. Ọ na-ekwu na ọnwụnwa nke ndị amoosu na-emegide ndị na-eme okpukpe ochie banyere Iso Ụzọ Kraịst. Gardner wepụtara Murray ihe oyiyi nke ndị amoosu nke gara aga dị ka ndị na-agwọ ọrịa bụ ndị jiri ihe ọmụma na ọgwụ na anwansi ha nyere ndị mmadụ nọ n'obodo ha aka ịnagide ọrịa, amaghị ọmụmụ na nsogbu ndị ọzọ. N'oge Gardner na-ede akwụkwọ, a na-ewere Murray dịka onye ọkachamara n'ule ndị amoosu, ọ bụ ezie na ọrụ ya mesịrị ghọọ onye agha, ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme adịghịkwa anabata ya.
A na-eme ka ime anwansi na ime anwansi jikoo n'ime usoro nkwenye nke Wiccans. Usoro anwansi bụ otu nke dabere na ọrụ nke Aleister Crowley, bụ onye mere ka ihe ọmụma dị na Western Western. Ọ kọwapụtara anwansi dị ka mgbanwe nke eziokwu ka ọ dị. Omume anwansi emeela ka ọ daa n'Ebe Ọdịda Anyanwụ ma ọ dịghị mgbe funahụrụ (Pike 2004). Enwere ike ichoputa ha n'azu nke iri na abuo nke Cabbala na nke Grik nke oge ochie site na Iso Ụzọ Kraịst ma dị mkpa n'oge mgbanwe sayensị (Waldron 2008: 101).
N'ime ememe Wiccan, a na-ekwenye na a na-etolite ụdị ike dị egwu site na ịgba egwú, ịkụ abụ, ntụgharị uche, ma ọ bụ ịgba egwu, nke nwere ike ịbụ eduzi na ihe kpatara ya, dị ka ịgwọ onye ma ọ bụ ịchọta ọrụ, ebe a na-adọba ụgbọala, ma ọ bụ ụlọ ezumike. Ekwenyere na ike nke onye ọ bụla na-eziga ga-alaghachi ya / ya ugboro atọ, ya mere, ụdị anwansi kachasị amara bụ ọgwụ anwansi. Ịrụ ọgwụgwọ abụọ na - enyere aka igosi na Witch nwere ikike anwansi na ọ na - eji ya eme ihe (Crowley 2000: 151-56). Maka Wiccans a na-ele ụwa anya dị ka ihe anwansi. A na-ekwukarị na Chineke ma ọ bụ Chineke nwere ike iziga mmadụ otu ihe ịrịba ama ma ọ bụ nye ha ntụziaka na ndụ. Ndị a nwere ike ịbịa n'oge ememme ma ọ bụ ntụgharị uche ma ọ bụ na-adị kwa ụbọchị ka ndị mmadụ na-eme ndị enyi ochie ma ọ bụ na-achọta ihe na ájá n'akụkụ osimiri nke ha kwenyere na ọ bụ mbubata. Ya mere, ime anwansi bu uzo nke ichota na Chineke na odidi. A na-ele ime anwansi anya dị ka akụkụ nke ụwa nkịtị ma gosipụta njikọ nke mmadụ n'otu n'otu, na ibe ya, na Chineke.
Ndị Wiccans na-edebe Akwụkwọ nke Onyunyo, nke na-agụnye ememme na mgbaasị kpakpando ndị na-arụ ọrụ maka ha. Ochichi ndi isi nchu aja na onye isi nchu aja, ndi isi nke ndi agba ya, ka ha keta akwukwo odidi ha na ndi ha na-ebido, na-enye ha ohere ka ha duputa ufodu ememe. Akwụkwọ ọ bụla nke Onyunyo dị iche iche na Wiccan bụ onye kere ya, ọ bụ ọrụ nke aka ya n'onwe ya.
Ọtụtụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile, Wiccans kweere na ịlọ ụwa (Berger et al 2003: 47). A na-eche na ndị nwụrụ anwụ ga-aga Summerland n'etiti ndụ, ebe mkpụrụ obi ha ma ọ bụ mkpa ha nwere ohere ichebara ndụ ha biri tupu ha alaghachi ụwa ọzọ ka ha nọgide na-eto eto. Karma nke omume ha gara aga ga-emetụta ọnọdụ ha na ndụ ọhụrụ ha. Ma, n'adịghị ka e si eche echiche banyere Ọdịda Anyanwụ nke nlọghachị nke na-emesi ọchịchọ ịkwụsị usoro ọmụmụ a, ọnwụ na nlọghachi azụ, ịlaghachi na ndụ ka Wiccans na-ele anya ọma. Onye nwere ike ime ka ya na ndị dị mkpa dị ndụ n'oge gara aga, mụta ma gbasaa n'ụzọ ime mmụọ.
N'ime Wicca, ememe ndị dị mkpa karịa nkwenkwe dịka ha na-enyere aka na-etinye aka na ihe ime mmụọ ma ọ bụ ihe dị egwu. Ememe ndị a na-emekarị gụnyere gburugburu nke afọ (ụbọchị asatọ ahụ na-eme izu isii n'izu n'afọ) ma na-eduzi ha na solstices, equinox na ihe a maara dịka obe n'etiti ha. Ndị a na-echeta mmalite na ịdị elu nke oge ọ bụla na mmekọrịta dị n'etiti Chineke na Chi. A na-ahụ ọmụmụ, uto, na ọnwụ dịka akụkụ nke okike na-eme ememe. A na-eche mgbanwe dị iche iche na-egosi na ndụ mmadụ n'otu n'otu. A na-ewere Samhain (akpọ Sow-en), nke a na-eme na October 31 st, dị ka Wiccan New Year na nke a na-ebubata. A na-ekpuchi ihe mkpuchi dị n'etiti ụwa, nke ndị dị ndụ na nke mmụọ, na ọ dị mkpa karịsịa na mgbede a. Ndị Wiccans chere na oge kachasị mfe nke afọ ka ha na ndị nwụrụ anwụ kpọtụrụ. Nke a bụkwa oge mgbe ndị mmadụ ga-eme ọrụ anwansi iji kpochapụ ndụ ha nke àgwà, àgwà, na ndị mmadụ ndị na-abaghị uru ná ndụ ha. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike ime ememme iji wepụ nkwụsị ma ọ bụ iji nyere ha aka ịchịkọta ike ha ịhapụ ọrụ njedebe ma ọ bụ mmekọrịta anwụ anwụ. N'oge opupu ihe ubi, ememe ahụ na-eme ememe mmiri na ọmụmụ na ọdịdị mmadụ na ndụ ndị mmadụ. A na-enwekarị nguzozi n'ememe n'etiti mgbanwe ndị dị na ọdịdị na mgbanwe na ndụ mmadụ n'otu n'otu (Berger 1999: 29-31).
Esbats, ememe nke ọnwa, bu kwa nke mbubata. Na-agbada Ọnwa, nke nwere ike ịbụ omenala kachasị amara na Wicca n'ihi akwụkwọ nke Margot Adler (1978, 1986) na-edekọ aha ya, na-agụnye arịrịọ nke Chineke na ike ya na-abanye na Nnukwu Onye Nchụàjà. Maka ogologo oge nke ememe ahụ ọ na-aghọ chi nwanyị incarnate (Adler 1986: 18-19). A na-eme ememme a na ọnwa zuru ezu, nke a na-ejikọta na chi nwanyị n'oge ya dịka Nne. A na-emekarị ememme ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ọnwa nke ehihie, nke a jikọtara ya na crone. Obere oge a na-eme ememme maka ọnwa ọnwa. E nwekwara ememe maka alụmdi na nwunye (nke a na-akpọ aka-fastings); ịmụ nwa (Wiccanings); na mgbanwe statuses nke ndị sonyere, dịka ịbịbịa ọghọm ma ọ bụ ịghọ okenye ma ọ bụ na crone. A na-enwe ọhụụ maka nbido na maka ndị na-abụ ndị mbụ, nke abụọ, ma ọ bụ nke atọ Wiccans ma ọ bụ Witches. A pụkwara ime otu ihe maka ihe onwe onye, ​​gụnyere ememe maka ọgwụgwọ, maka enyemaka na nsogbu ma ọ bụ nsogbu dị iche iche, maka ememme oriri na ọṅụṅụ, ma ọ bụ maka ekele maka chi maka enyemaka ha.
Ndị Wiccans na-eduzi ememe ha dị nsọ na nke dị nsọ n'ime Circle a na-eme site na "ịcha" ohere ahụ n'ememe (ememe mma). Ebe ọ bụ na ndị Wiccans anaghị enwekarị ụka, ha kwesịrị ịmepụta ebe dị nsọ maka ememe ahụ na ihe dịkarịsịrị oghere. Nke a bụ nke nnukwu Onye Nchụàjà na Nnukwu Onye Nchụàjà na-eje ije gburugburu gburugburu ya ka ọ na-agbanye mgbapụta n'ihu ha ma na-abụ abụ. Ndị na-ahụ anya na-ahụ anya na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha ọcha na-enwu n'ebe ọ bụla iji mepụta ebe dị nchebe na dị nsọ. Nnukwu Onye Nchụàjà na Nnukwu Onye Nchụàjà ahụ na-akpọ ma ọ bụ na-akpọ ụlọ nche, ya bụ, ike nke ụzọ anọ (n'ebe ọwụwa anyanwụ, n'ebe ndịda, n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ugwu) na chi ndị metụtara nke ọ bụla. Ha na-edozi gburugburu na ndị na-esonyere ihe ndị a na-ejikọta na ntụziaka ndị a, nke a na-etinye na ebe ịchụàjà n'etiti etiti ahụ (Adler 1986: 105-106). A na-elegharị anya ebe ndị a na-eme ememe iji gosipụta ememe ahụ a na-eme. Dịka ọmụmaatụ, na Samhain, mgbe a na-eme ememe ọnwụ dịka akụkụ nke usoro ndụ, foto ndị ikwu na ndị enyi nwụrụ anwụ nwere ike ịchọọ ebe ịchụàjà; na May May (May 1 st) ga-enwe okooko osisi na mkpụrụ osisi n'elu ebe ịchụàjà, na-egosipụta ndụ ọhụrụ na ọmụmụ.
Ozugbo a tụgharịrị gburugburu gburugburu, ndị mmadụ na-ekwu na ha dị n'etiti ụwa n'ụwa. Ụdị maka emechaa ememe a. The Circle na-ejekwa ozi iji nweta ike nke a na-ewuli elu n'oge ememe ahụ ruo mgbe ọ dị njikere ịtọhapụ ya na ihe a maara dị ka Cone of Power. A na - eji egwu egwu, ịgba egwú, ntụgharị uche, na ịbasi egwu na Wiccans iji nweta ike n'oge ememe. E wepụtara akara nke ike maka nzube nke ndị Wiccan mere. Enwere ike inwe otu nzube ebumnuche, dịka ịgwọ otu onye ma ọ bụ oké ọhịa, ma ọ bụ onye ọbụla nwere ike ịnwe nzube nzuzo ya (Berger 1999: 31). Ememe ahụ na-ejedebe iko mmanya a na-etolite ma tinye ya n'ime ya, na-anọchite anya njikọ dị n'etiti chi nwanyị ahụ na Chineke. A na-agagharị mmanya ahụ gburugburu Circle na okwu ndị a bụ "Ngọzi" na ndị mmanya na-aṅụ. Ngọzi nke Onyeisi Nchụàjà na Onye Ngọzi na-agọzi azụ; ha na-agagharị na okwu "gọziri agọzi" wee rie (Adler 1986: 168). Mgbe ụfọdụ, a na-agbazi ememme ndị gba ọtọ (skyclad) ma ọ bụ na ejiji ejiji, dabere na omenala Wiccan na ebe a na-eme ememme. A na-emekarị ememe ma ọ bụ ememme ọha na eze na uwe mwụda ma ọ bụ uwe n'okporo ámá. N'ọgwụgwụ nke ememe ndị ahụ, a mepeela Circle ma na-ele ndị Watchtowers ala. Na omenala, ndị mmadụ na-ekere òkè nri, dịka a na-ahụ nri dị ka ọ dị mkpa maka ndị na-etinye ala (ya bụ, nyere ha aka ịpụ ala kpakpando na ịlaghachi na ụwa nke ụwa).
Ndị ọkachamara n'otu n'otu nwere ike isonyere ndị ọzọ Wiccans ma ọ bụ Pagans maka izu ụka ma ọ bụ esabats ma ọ bụ na-eme ememme ndị ahụ nanị. Ufodu di iche iche na-eme ememe ndi mmadu, otutu oge n'inye ego a gbaziri n'ulo uka ma obu ulo ulo akwukwo ihe omuma. Ọ bụrụ na onye ahụ na-eme ememe nanị ya, ọ na-agbanwe ihe ememe ahụ dị mkpa. Akwụkwọ na weebụsaịtị ụfọdụ na-enye ndụmọdụ iji nyere ndị nkịtị aka ịme ememe ndị a n'otu n'otu.
Dị ka nchọpụta American Identity Identity mere na 2008, e nwere 342,000 Wiccans na United States. Nke a kwekọrọ na ọnụ ọgụgụ nke ndị nọ n'afọ iri na ụma na ndị Wiccans na-eto eto bụ ndị dị na National Survey of Youth and Religion (Smith na Denton 2005: 31; Smith na Snell 2009: 104) Ọtụtụ ndị ọkachamara kweere na ọnụ ọgụgụ a dị ntakịrị, dabere na ahịa akwụkwọ Akwụkwọ Wiccan na ahia na weebụsaịtị Pagan. Ka o sina dị, okpukpe bụ okpukpe dị nta. Ndị Wiccans na-ebi na United States dum, na ọdụ kachasị na California ebe pasent iri nke ndị Wiccans bi. District nke Columbia na South Dakota nwere pasent nke kachasị elu, na otu ụzọ n'ụzọ iri nke otu percent nke Wiccans bi na nke ọ bụla n'ime ebe ndị ahụ (Berger unpublished).
Enweghị onye ndu ọ bụla maka ndị Wiccans ma ọ bụ ndị Witches. Nganga kachasị onwe ha na-enweghị isi. Na omenala, a kụziiri Wicca na ọgbụgba ndụ, mana ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị Wiccans na-ebute onwe ha, ebe ha mụtara ihe banyere okpukpere chi si n'aka akwụkwọ na nke abụọ site na weebụsaịtị. A na-akwanyere ụfọdụ ndị ùgwù nke ọma ma mara n'ime obodo, ọ bụ n'ihi na ha edere ya. Miriam Simos, onye edere aha ya aha ya bụ Starhawk, a na-akpọ onye Witch nke a ma ama na West (Eilberg-Schwatz 1989). Akwụkwọ ya nwere mmetụta dị mkpa n'okpukpe, ọ bụkwa ya bụ onye guzobere ya na otu n'ime ndị ndú nke ọdịnala ya, The Witches Witches. Ọbụna ndị na-agụghị akwụkwọ ya nwere ike imetụta echiche dịka ha ghọworo akụkụ nke isi echiche nke ọtụtụ n'ime okpukpe. E nwere ụfọdụ ụlọ ọrụ nche nchịkwa, dịka ọgbụgba ndụ nke Chineke (CoG), CommunitySpirit, na Ebe Obibi nke na-ahazi ememme, nwee ememme ememe maka ememe ndị dị mkpa, nyefee ebe nrụọrụ weebụ na ihe ọmụma, na ịlụ ọgụ megide ịkpa ókè maka ndị omere. Ha na-akwụ ụgwọ obere ụgwọ maka ịbụ onye òtù na ụgwọ ndị ọzọ maka ememme ememe na ememme oriri. Enweghị onye ọ bụla a chọrọ ka ọ bụrụ onye so na ya, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị Wiccans na-abụghị ndị òtù ọ bụla. Ka o sina dị, ìgwè ndị a dị mkpa, ọtụtụ n'ime ndị ndú ha makwaara nke ọma n'ime obodo ndị ka njọ.
Enwere esemokwu dị ogologo n'etiti ndị ọkachamara banyere akụkọ nsọ dị nsọ dịka nke Gardner gosipụtara. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị Wiccans ugbu a na-ewere ya dị ka ntọala akụkọ ifo, obere ndị obere kwenyere na ọ bụ eziokwu. Ọtụtụ ndị ọkachamara, dịka Hutton na Tully enwewo nzere ha na ọrụ ndị ọkachamara na-ekwenyeghị na nyocha ha ma ọ bụ ihe omume. Hutton (2011: 227) na-ekwu na ndị na-akatọ ya na ndị ọzọ jụrụ ajụjụ ahụ Gardner kwuru na akụkọ ihe mere eme nke oge ochie na omume nke Ịta Amoosu enyeghị ihe ọhụụ ọ bụla iji kwado nkwupụta ha. Hutton (2011, 1999), Tully (2011) na ndị ọzọ na-arịba ama na e nwere ihe ụfọdụ nke ịnọgide na-aga n'ihu n'etiti Ndị Kraịst na ndị dị ugbu a, karịsịa na nkwenkwe na omume siri ike, mana na nke a apụtaghị ọdịnala okpukpe na-adịghị agwụ agwụ ma ọ bụ omume. Hutton na-ekwusi ike na ụfọdụ n'ime ihe ndị na-eme ihe ọjọọ na-eme n'oge gara aga abanyela na Iso Ụzọ Kraịst, ụfọdụ n'ime ha nọgidere bụrụ akụkọ egwu, Gardner na-etinyekwa uche ya. Omume Wiccan na-agwa ya site na omume ndị gara aga dị ka ya na ndị ọzọ ma nke ahụ apụtaghị na ndị ahụ e gburu dị ka ndị amoosu n'oge ochie bụ ndị na-eme okpukpe ochie dị ka Margaret Murray kwuru ma ọ bụ na ndị na-eme ihe ugbu a nọ na akara na-adịghị -Christian ndị Europe ma ọ bụ ndị Britain.
Ọ bụ ezie na Wicca enwetawo nkwado n'ime afọ iri abụọ gara aga, ọ nọgidere bụrụ okpukpe dị nta ma nọgide na-alụ ọgụ nnwere onwe okpukpe. Ndị Wiccans enwetawo ọtụtụ ikpe ụlọ ikpe na-eme ka pentagram bụrụ ihe nnọchianya a nabatara na ili na ebe a na-eli ozu agha, na, na nso nso a na California, ọ bụ na a mara na ndị mkpọrọ Wiccan ga-enye ndị ụkọchukwu ha (Dolan 2013). Ka o sina dị, a ka na-enwe ịkpa ókè. Dịka ọmụmaatụ, na Sunday, February 17, 2013 Friends of Fox anchors kwara Wicca mgbe ọ na-akọ na Mahadum nke Missouri ghọtara oge ezumike nile nke Wiccan (n'eziokwu ọ bụ naanị ụbọchị izu ụka). Mpịakọta atọ ahụ gara n'ihu ikwusa Wiccans bụ ụlọ mkpọrọ na ndị dragọn ma ọ bụ ndị inyom gbara alụkwaghịm abụọ gbara alụkwaghịm bụ ndị bi n'ime ime obodo, bụ ndị inyom n'etiti ndị inyom na dị ka ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. Ihe osise a bụ ma eweda ya ala ma bụrụ nke na-enweghị ngọngọ dị ka nchọpụta niile na-egosi na ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị Wiccans bụ ụmụ nwanyị, ha na-ebi ndụ n'obodo ndị mepere emepe na ndị dịpụrụ adịpụ ma yikarịrị ka ha ga-eto eto dị ka ndị okenye, Berger 2003: 25-34). Mgbe mkpesa na-eduga site na Selena Fox nke Circle Sanctuary, netwọk rịọrọ mgbaghara. Ka o sina dị, ọtụtụ ndị Wiccan kwenyere na ihe oyiyi ndị ahụ na-adịghị mma, dị ka nke a na-ekwu na akụkọ Fox, bụ ndị nkịtị ma nwee ike imetụta ohere ndị mmadụ nwere n'ọkwá na ikike ha wepụtara oge iji mee ememe okpukpe ha. Otú ọ dị, ọ dị ka ngbanwe site na Wiccans dị ka ekwensu na-efe ofufe ka a weere ya dị ka nzuzu ma ọ bụ na-adịghị njọ. Ọtụtụ ndị Wiccans nọ na-arụ ọrụ iji mee ka okpukpe ha mara dịka omume ziri ezi ma dị njọ. Ha na-arụsi ọrụ ike n'okwukwe na-esonye na nzuko omeiwu nke ụwa.
Adler, Margot. 1978, 1986. Na-agbada Ọnwa. Boston: Beacon Press.
Berger, Helen., A. 2005. "Amoosu na Neopaganism." Pp 28-54 na Ịta Amoosu na Ime Anwansi: Contemporary North America, dezie ya. H elen A. Berger, 28-54. Philadelphia: Mahadum nke Pennsylvania Press.
Berger, Helen A. 1999. Otu Obodo Witches: Neo-Protestant na Ịta Amoosu na United States. Columbia, SC: Mahadum South Carolina Press.
Berger, Helen A. unpublished "Ọgụgụ Na-eme Ihe Ọjọọ Aghaghachiri: nchọpụta ụwa nke Pagans.
Berger, Helen. A., Evan A. Leach na Leigh S. Shaffer. 2003. Ndi mmadu sitere na ndi mmadu ndi mmadu noo: Contemporary: A Survey National of Witches and Neo-Pagans in United States. Columbia: SC: Mahadum South Carolina Press.
Buckland, Raymond. 1986. Buckland zuru ezu ma ọ bụ Akwụkwọ amoosu. Paul, Mn: Llewellyn Publications.
Clifton, Chas S. 2006. Ụmụ Ya Zoro Ezo: Nwelite Wicca na Paganism na America. Owuwu Creek, CA: AltaMira Press.
Crowley, Vivianne. 2000. "Na-agwọ ọrịa na Wicca." Pp. 151-65 na Ụmụ nwanyị nke Chineke: Nyocha nke Ịgwọ Ọkụ, Ịmara, na Ịmịcha, edeziri site na Wendy Griffin. Owuwu Creek, CA: AltaMira Press
Cunningham, Scott. 1988. Wicca: Nduzi maka Onye Na-ahụ Maka Onwe Ya. Paul, MN: Llewellyn Publications.
Dolan, Maura. 2013 "Courtlọikpe na-eweghachi ikpe na-achọ ndị ụkọchukwu Wiccan n'ụlọ mkpọrọ ụmụ nwanyị" Los Angeles Times , February 19. Nweta site na http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2013/02/court-revives-lawsuit-over-wiccan-chaplains-in-womens-prisons.html na March 27, 2013.
Eilberg-Schwatz, Howard. 1989. "Ndị amoosu nke ọdịda anyanwụ: Ọchịchị Neo-Paganism na Ofufe Chukwu dị ka Okpukpe Ndị Na-enye Ihe Ọmụma." Journal of Feminist Studies of Religion 5: 77-95.
Griffin, Wendy. 2002. "Chi Chineke na Wicca." Pp 243-81 na Olu ya, Okwukwe Ya: Ụmụ nwanyị Na-ekwu Okwu Okpukpe nke Ụwa, nke Katherine K. Young dere na Arvind Sharma. Boulder, Ịzụ: Westview Press.
Hutton, Ronald. 2011 "Nyochagharị na Nkọwapụtaghachi na akụkọ ihe mere eme" Ngwá pọmigranet ahụ12: 225-56
Hutton, Ronald. 1999. Ọdịnihu nke ọnwa: A History of False Witchcraft Modern. Oxford: Oxford University Press.
Kelly, Enyemaka. A. 1991. Ịrụ Ọrụ Ime Anwansi: Book I. Paul, MN: LLewellyn Publications.
Murray, Margaret A. 1921, 1971. The Witch-Cult in Western Europe. Oxford: Clarendon Press.
Neitz, Mary-Jo. 1991. "Na Chi nwanyị Anyị Tụkwasịrị Obi." Pp.353-72 na Na Chineke anyị na-atụkwasị obi nke Thomas Robbins na Dick Anthony dere. New Brunswick NJ: Ahịa Pịa.
Pike, Sarah. M. 2004. Ọhụrụ afọ na Neopagan okpukpe na America . New York: Ụlọ ọrụ University Press.
Salomonsen, Jone. 2002. Ụmụ nwanyị na-enyo enyo: Ndị Witches na-azọpụta nke San Francisco. London: Routledge Press.
Smith, Christian na Melinda. L. Denton. 2005. Mkpụrụ obi na-achọ: Okpukpe na Ime Mmụọ nke Ndị Na-eto eto America. Oxford: Oxford University Press.
Smith, Onye Kraịst na Patricia Snell. 2009. Mkpụrụ Obi na Mgbanwe: Okpukpe na Ndụ Ime Mmụọ nke Ndị Tozuru Okè. Oxford: Oxford University Press.
Starhawk. 1979. Ogwurugwu Igwe. San Francisco: Ndị mbipụta Harper & Row
Tully, Caroline. 2011. Akwụkwọ edere na nzukọ kwa afọ nke American Academy of Religion, Orlando, FL.
Waldron, David. 2008. Ihe Ịrịba Ama nke Onye Nwụrụ Anwụ: Oge Ọmụmụ na Ọchịchị Egwu. Durham, NC: Carolina Academic Press.